Ajụjụ Ndị A Na-ajụkarị - Flọ Ahịa ASFO
Kedụ uru dị n'ịzụta n'ịntanetị?
Enwere uru dị iche iche n'ịzụta n'ịntanetị: can nwere ike ịme ịzụta gị n'oge ọ bụla ma ọ bụ ụbọchị (awa 24/7 ụbọchị kwa izu / ụbọchị 365 kwa afọ); Nweta ngwaahịa ị nyere n’ụlọ ma ọ bụ n’adres ị na- egosi; Ọnụ ego dị ala na ohere pụrụ iche iji nweta nkwalite nanị; Site na nchekwa data anyị, yana mgbe azụtara gị nke mbụ, a na-akwado usoro ịzụrụ maka ịzụrụ n'ọdịnihu.
Ọ bụ iwu ka ọ debanye aha na webụsaịtị ịme ịzụrụ ihe?
Ndebanye abụghị iwu, mana ọ ga-ewetara gị uru pụrụ iche! Tonweta mkpọsa na onyinye pụrụ iche: ị ga-enweta Kupọns, onyinye, ego na ozi ọma na email ị debanye aha gị! Purchasezụta ngwa ngwa: naanị mejupụta ụdị ndị otu anyị otu oge, na ịzụrụ ihe n'ọdịnihu ma ọ bụ data gị ga-edebanye aha na akpaghị aka. Historytụ akụkọ ihe mere eme: ị nwere ike mgbe niile ịlele ịzụrụ ị mere.
Kedu ihe m ga-azụ?
Anyị na-azụ ahịa ngwa ahịa niile dịkarịsịrị na ahịa ọgwụ: ọgwụ depụtara ya; Nleta nke karị, ngwaahịa ịchọ mma na ịdị ọcha, nri nri, ọgwụ orthopedics, n'etiti ndị ọzọ. Ọ bụrụ na ịchọtaghị ihe ịchọrọ, biko kpọtụrụ anyị!
Storelọ ahịa a na-eziga akwụkwọ ọnụahịa? Ọ bụrụ na ịchọtaghị ihe ịchọrọ, biko kpọtụrụ anyị!
Site n'usoro nke ọ bụla, zigharịtara ọnụahịa nke ngwaahịa azụtara.
Kedu otu m ji n’aka na enwetara iwu m?
Mgbe emechara iwu gị, ị ga-enweta nzaghachi akpaghị aka na-agwa gị na a haziela ya.
Ọ ga-ekwe omume ịnata ego ahụ na adreesị dị iche na adreesị ịgba ụgwọ?
Ee. N'oge zụọ ahịa na-eso dị ka ndị a: Na ibe peeji nke ịzụta ya ga-ahọrọ nhọrọ "Zipu maka adreesị dị iche iche" N'ụzọ a, ị nwere ike ịgbanwe wee gosi adreesị nke ịchọrọ iji nata iwu gị. Usoro a anaghị agbanwe adreesị ịgba ụgwọ.
Enwere uru ịtụ ahịa kacha nta?
Onweghi ikike iji nke pere mpe.
Kedụ ka m ga-esi mara uru m ga-akwụ?
Na njedebe nke usoro ịzụta, yana n'ihe banyere ngwaahịa / ọgwụ dị nro na-enweghị ndenye ọgwụ, sistemụ na-agwa uru ị ga-akwụ, nke gunyere nkwụghachi ụgwọ ọ bụla na ntinye akwụkwọ (ọ bụrụ na ọdabara) n'ihe banyere inweta ọgwụ ndenye ọgwụ mmado, ị ga-eme emesia nata email na uru ikpeazu, nke g’ebu ntinye aka na ego.
Ọ dị mma ịkwụ ụgwọ maka weebụsaịtị? A na-echebe data onwe onye?
Solọ ahịa ọgwụ Sousa Torres SA na-agbaso iwu nzuzo siri ike. Data gị agaghị adị n'okpuru ọnọdụ ọ bụla enyere ndị ọzọ na-enweghị ihe ọmụma na nkwenye gị. Ojiji nke usoro https: // na-emesi obi ike na nchekwa nke mbufe ozi na data n'ịntanetị.
Enwere m ike ịkwụ ụgwọ n'ụzọ kachasị dị m mma?
N'iburu n'uche na usoro ịkwụ ụgwọ dabere na ọnọdụ nnyefe a họọrọ, n'etiti nhọrọ ịkwụ ụgwọ enwere ike ịhọrọ nke kachasị adabara gị.
Ọ dị mma iji kaadị akwụmụgwọ kwụọ ụgwọ?
Mgbe idejupụta ozi ịkwụ ụgwọ ahụ, etinyere njikọ dị n'etiti ihe nchọgharị gị na Hipay, ụlọ ọrụ na-eme azụmahịa ahụ. Ihe sava eji eji echedoro zoro ezo, ya na ndozo siri ike, iji mee ka nchedo nke data ugwo di na nbudata ha. Na ugwo site na Ebe E Si Nweta kaadị, a ga-arịọ aha onye nwe ya, ụbọchị ngafe bụ koodu nche, nke achọtara n’amaokwu kaadi ahu, n’akụkụ aka nri nke oghere edebere maka mbinye aka nke kaadi. ihe njide, nke nwere akara atọ, na CVV (koodu nyocha). N'iji usoro ịzụta ihe a ka ọ dị nchebe karị, anyị chọrọ na, n'iji Kaadị E Si Nweta, pịa nọmba 3 ma ọ bụ 4 nke koodu nche (CVV). Dika koodu si di na kaadi ahu, a na-egbochi ohi ojoo ojoo n’enweghi nsogbu.
Kedu ka m ga-esi kagbu iwu?
Bụrụ na i bu n’obi ime ya, mee ya ngwa ngwa o kwere omume. Iji kwe nkwa ịkagbu, ikwesịrị ịkpọtụrụ Nkwado Ndị Ahịa iji gosi ma ọ bụrụ na ọ ka bụ nzesa. Bụrụ na enyerelarị ya, ọ gaghị enwe ike ịtụle ịkagbu.